Ngokuvamile sinake lokhu noma lokhuya uphawu kuphela uma ngokuqondile "ngeke kulondeke odongeni." Ukuze-lymph, abaningi bamshaya indiva, futhi ngaphawula ukuthi baye banda baba, kusukela ukwethuka. Yiqiniso, lokhu kungaba ukugula okungathí sina, kuze Oncology. Kodwa lo mkhuba kungenziwa kwabangela futhi ngenxa yezizathu eziningana ucishe kwansuku zonke. Ake sibheke ukuthi kungani lezi zindikimba wande, kuthiwani uma avuvukele lymph node entanyeni, futhi ubani ukuxhumana?
Ukwanda usayizi lymph node imibukiso ukuthi kukhona izinqubo ukuvuvukala emzimbeni. Eqinisweni, uhlelo lymph iyisithiyo ukutheleleka, amagciwane noma ezinye Amagciwane kanye iqala gqwa kwamagciwane futhi "kabusha" ke. Kodwa futhi ayegcina izimpawu ezengeziwe, okuyinto zichaziwe ngezansi. Uma eziningana lymph avuvukele ISIZINDA - ukuze isistimu ingakwazi yini ukuyikhulisa kahle. Kukhona into enjalo emva viral izifo / amagciwane libizwa lymphadenitis. Eqinisweni,-lymph akuzona kuphela entanyeni, kodwa futhi on entanyeni, ngemuva ezindlebeni, enzansi, in the imbilapho.
Izifo ezibangela lymphadenitis
Ngaphambi kokukhuluma, kuthiwani uma avuvukele lymph node entanyeni, kufanele baqonde indlela lokhu kungenzeka zifinyelele isimo okungenampilo. Ukutheleleka ababengase bakuthole izinyo nesineke, furuncle, izilonda, felon, noma eminye imithombo efanayo. Lymphadenitis wabonakaliswa ifindo ubuhlungu, abo ukuminyana, imfiva okuncane, ikhanda elibuhlungu, umkhuhlane futhi ubuthakathaka. Lapho suppuration "ukuhlunga begazi" zonke izimpawu ngenhla zikhulisa kakhulu, futhi imfundo ibe okuqinile, engasuki futhi ukwandisa ngobukhulu. Kulokhu, isikhumba endaweni lesion kuthatha luhlaza evelele abomvu.
Kuthiwani uma avuvukele lymph node entanyeni?
Uma ngandisa eyodwa kuphela-lymph node, kodwa nhlobo izimpawu zesifo babonakala - ngakho-ke nje usebenza izikhandle kakhudlwana ekufuneni kunabanye. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa ngokuvamile kwenzeka ngesikhathi noma ngemuva izifo odlule. Ngokuhamba kwesikhathi, umzimba umsebenzi kuyinto evamile, futhi kuthatha ubukhulu ubudala. Kodwa kuthiwani uma avuvukele lymph node entanyeni?
Okokuqala ukuya kudokotela, ngubani zizodingida yokuvota. Lapho isiqinisekiso lymphadenitis uzodinga ihlonzwe, ezovela, okuyindawo lakhulisiwe lymph node entanyeni. Yini udokotela kuzokusiza nale? Okokuqala, kudingeka baphendukele owelapha, ubani, uma isidingo kube, ukuqondisa kabusha isiguli kwesinye onguchwepheshe.
Lakhulisiwe lymph node entanyeni. izizathu
imithombo eyinhloko izinkinga ezinjalo kungaba abaningi. Njengoba sekushiwo ngenhla, ngokuvamile imbangela yezifo ezithathelwanayo ezifana esizokhokhwa ngamancozuncozu futhi okulindile. Ngisho umkhuhlane noma izinyo ezimbi ingabangela ukwanda amayunithi. Kodwa ngesikhathi esifanayo kunezizathu eziningi ezinkulu. ukuvuvukala Buhlungu ka ISIZINDA ebonwe iziguli ezinegciwane lesandulela-ngculaza. Lokhu uphawu efanayo kungabonakala nasemkhakheni umdlavuza. Nquma ncamashi awukwazi.
Into kuphela ukuthi liyadingeka isiguli - ukuthi wayeqonda ukuthi-lymph ukuqonda yonke amagciwane nokunye. Ngakho-ke, abakwazi lizwakale linemfudumalo. Ukulibopha angenza kuphela kwemvume udokotela, osevele isungule uphethwe. Kungenjalo, ubovu lymphadenitis kufanele isebenze. Ngaphezu kwalokho, uyobe engathathi ngakususi Oncology. Ngakho-ke, ukuze kungabi ukusebenzisa futhi musa ukuba zimbi kakhulu isimo sabo - "? Kuthiwani uma abavusa lymph node" ikheli ngokushesha kudokotela hhayi google-Inthanethi